रेडियो ताप्लेजुङ असार २३ गते खेल: इंग्ल्याण्डका कि स्विडेन ? के रुसले क्रोएसियालाई घर पठाउला ?
असार २३ गते खेल: इंग्ल्याण्डका कि स्विडेन ? के रुसले क्रोएसियालाई घर पठाउला ?
असार २३ गते । रुस विश्वकप २०१८ अन्तर्गत आज क्वाटर फाइनलका अन्तिम दुई खेल हुँदैछन् । साँझ पौने ८ बजे इंग्ल्याण्ड विरुद्ध स्विडेन र राति पौने १२ बजे रुस विरुद्ध क्रोएसिया भिड्दैछन्।
यता विश्वकपको नकआउट चरणमा भएका पेनाल्टी सुट आउटमा सँधैंै अभागी सावित हुँदै आएको इंग्ल्याण्ड यसपटकको विश्वकपमा भने भाग्यमानी सावित भएको थियो। उसले कोलम्बियालाई पेनाल्टी सुट आउटमा ४–३ ले पाखा लगाउँदै सन् १९९० पछि पहिलो पटक सेमिफाइनल पुग्ने सपनालाई कायमै राख्न सफल भएको थियो। सन् १९६६ को विश्वकप जितेको इंग्ल्याण्ड यसपटकको विश्वकप जित्दै समर्थकहरुका मुहारमा लामो समयदेखि देखिएको निरासालाई खुसीमा परिणत गर्ने तयारीमा रहेको छ।
श्निबारको खेलमा स्विडेनका भरपर्दा डिफेन्डर माइकल भने एक खेल निलम्बनमा परेका कारण टोलीमा समावेस हुनेछैनन् ।